Nhau - Nongedzo Pfupi kune Antistatic Micheka
Kwemakore apfuura ini ndakabvunzwa kana machira edu ari anti-static, kuitisa, kana kudzikisira. Uyu unogona kunge uri mubvunzo wakaomarara unoda zvishoma kosi pfupi muinjiniya yemagetsi. Kune avo vedu vasina iyo imwe nguva yekuwedzera isu takanyora ino blog chinyorwa kuyedza kutora zvimwe zvezvakavanzika kunze kwemagetsi emagetsi uye nzira dzekudzora mumachira.
Kuti unzwisise musiyano uripo pakati peantistatic, dissipative uye conductive sezvo ichienderana nemagetsi uye machira iwe unofanirwa kutanga wanzwisisa musiyano uripakati pemazwi ekuti insulation uye conductive sezvo achienderana nemagetsi, saka ngatitangei nedzimwe tsananguro
Ma conductor zvinhu kana mhando dzezvinhu zvinobvumidza kuyerera kwemagetsi emagetsi mune imwe kana nzira zhinji. Simbi dzinonyanya kuitisa uye ndosaka dzichishandiswa kufambisa magetsi mumba mako muchimiro chemagetsi wiring, semuenzaniso. Insulators ingori yakapesana nema conductor mukuti iwo zvinhu izvo magetsi magetsi asingayerere zvakasununguka, uye nekudaro kudzikamisa kuyerera kwemagetsi.
Kudzokera kune yedu yemagetsi waya muenzaniso, nepo magetsi achiyerera mushe nesimbi haifambe zvakanaka kuburikidza nePVC uye bepa iro rinoshandiswa kuputira waya yemagetsi. Vavharidzi pane tambo yekuwedzera, PVC nebepa, vanodzivirira kuti mutero upfuure nepakati pavo uchibvumidza kubata tambo usingavhunduke.
Kazhinji PVC inogadzira yakanaka insulator, asi pane zvinhu izvo zvinogona kuitwa kugadzira PVC yakagadzirwa machira kuti iwedzere kuitisa. Iyo nhanho yekumanikidza kune izvo zvinhu kuti ichinje ayo anoitisa zvivakwa anozoisa mune imwe yeatatu classified; antistatic, static dissipative, kana kuitisa.
Zvinoenderana neMIL-HDBK-773A DOD Handbook hezvino zvinotevera tsananguro yeaya matatu maratidziro:
Antistatic - Inoreva chivakwa chechinhu chinotadzisa triboelectic kubhadharisa chizvarwa mhedzisiro. Triboelectric kuchaja kwakanyanya kunofambira mberi magetsi.
Static Dissipative - Chinyorwa icho chinokurumidza kudzora magetsi emagetsi pamusoro payo kana vhoriyamu, iine resistivity renji pakati peyakaitisa uye inodzivirira.
Inoitisa - Zvishandiso zvinotsanangurwa sekunge zviri pamusoro kana vhoriyamu conductive. Midziyo yakadaro inogona kunge iri yesimbi kana kuiswa mudare nesimbi, kabhoni masenduru, kana zvimwe zvinogadzira zvinhu kana iyo nzvimbo yaro yakagadziriswa nezvinhu zvakadaro kuburikidza nekuita lacquering, plating, metallizing, kana kupurinda.
Kuti uone kana zvishandiso zvichisangana nechimwe chezvinhu zvitatu izvi pane kuyedzwa kunogona kuitwa kuyera pamusoro pekupokana iyo inoyerwa mu ohms / square. Pazasi pane girafu inoronga iwo maratidziro akavakirwa pamadziro ekudzivirira epasi.
Paunenge uchigadzira yako chigadzirwa mhinduro iwe uchafanirwa kuona kuti ndeipi nhanho ye conductivity iyo application ichada. Izvo zvakakosha kuti iwe unzwisise izvo zvinodiwa zveicho chaicho kunyorera uye kana uchibata nemainjiniya kana vagadziri zvingangodaro zviri nani kubvunza iyo Ohms nhanho iyo yavari kuda.